रुघाखोकी बढ्यो, मौसमी रुघाखोकी र कोरोना भाइरस कसरी छुट्याउने? – Health Post Nepal
रुघाखोकी बढ्यो, मौसमी रुघाखोकी र कोरोना भाइरस कसरी छुट्याउने?
२०७८ भदौ १८ गते ११:४०
पछिल्ला केहीदिनयता काठमाडौं उपत्यकामा मौसमी रुघाखोकीका बिरामी बढ्न थालेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणसहित विभिन्न अस्पताल आउनेको संख्या बढेको छ।
अहिले विभिन्न अस्पतालमा फ्लु वा रुघाखोकीको लक्षण लिएर कोरोनाको आंशकामा दैनिक बिरामीहरु आत्तिँदै आइरहेका हुन्छन्।
सामान्यतया, मार्च र अप्रिल महिनामा मौसमी रुघाखोकी सधैँ देखिने गर्छ। यसर्थ, रुघाखोकी लाग्दैमा र सामान्य ज्वरो आउँदैमा कोरोनाको आंशका गरेर आत्तिनुपर्दैन ।
मौसम परिवर्तनको समय भएकाले भाइरल इन्फ्लुएन्जाका बिरामीहरू बढिरहेको टेकु अस्पतालका सरूवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन बताउँछन्।
रुघाखोकी र कोरोनाका लक्षण उस्ताउस्तै हुनाले मान्छेहरु झुक्किन्छन् र आत्तिन्छन्। तर कोरोना भाइरस हो कि होइन शंका गर्न त्यसको अरु कारणहरु राम्ररी परीक्षण गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ।
रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जालगायतले गम्भीर श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या ननिम्त्याउने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरिएको छ।
तर, कहिलेकाहीँ भाइरल रुघाखोकी भनेर परीक्षण नगराइ बस्दा दुई हप्तापछि पनि निमोनिया भई गम्भीर समस्या देखिनेसक्ने डा. पुन बताउँछन्।
मौसम परिवर्तन भएसँगै रुघाखोकी तथा फ्लुको लक्षण देखिन थालेको छ । तर कोरोना नै भन्ने भय मनमा पाल्न नुहने डा. पुनको बताउँछन्।
‘अहिलेको समयमा रुघाखोकीको लागेको छ भन्ने पनि अधिंकास मानिसलाई कोरोना लाग्यौं शंका गरिरहेका हुन्छन्,’ डा. पुन भन्छन्, ‘ मानिसहरू मलाई कोरोना लाग्यो भने परिवारमा बालबालिका तथा अन्य सदस्य लाग्यौं कि भन्ने मानसिक तनावमा रहेको पाइन्छ।’
सामान्य ज्वरो आउनु, रुघाखोकी लाग्ने लक्षण अहिले मौसम परिवर्तन भएसँगै देखा पर्ने हुन्छ। तर, भाइरल फ्लले अत्याधिक रूपमा बालबालिकालाई संक्रमण गर्ने हुन्छ।
इन्फ्लुएञ्जाको संक्रमणको जोखिम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा हुन्छ। यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र पाका उमेरका व्यक्तिमा इन्फ्लुएन्जाले छिटो आक्रमण गर्छ। बालबालिका र ६० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति बढी रुघाखोकी र ज्वरो आउँदा सचेत रहनुको विकल्प छैन। किनकी इन्फ्लुएन्जाबाट संक्रमित भएका करिब २ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुन्छ।
मौसमी फ्लु भने इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले हुन्छ। यसमा अचानक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, हाडजोर्नी दुख्ने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, घाँटी ख्याप्प बस्ने, आँखाका गेडी दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छ। अलि बढ्दै गयो भने सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। यस्ता लक्षण देखिएमा आराम गर्ने, पानी तथा झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त खाने, सामान्य एन्टिएलर्जिक औषधि सेवन गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ ।
एक्कासि उच्च ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वास तथा छातीमा समस्या देखिने, स्वादमा फरकपन आउनेजस्ता लक्षण कोरोना भाइरस संक्रमणका हुन्। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल गएर वा चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर घरमै पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
डा. पुन कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएर तीन दिनभन्दा बढी बिरामी भएमा पीसीआर परीक्षण सुझाव दिन्छन्।
१‌. खोक्दा, हाछ्यूँ गर्दा नाक, मुख छोप्ने
२. सही तरीकाले साबुनपानीले पटक–पटक हात धुने
३. अन्य व्यक्तिसँग कम्तिमा एक वा दुई हात टाढा रहने
४. रोगीलाई बेग्लै वा खुला झ्याल भएको कोठामा राख्ने । सम्भव भएसम्म अन्य व्यक्तिभन्दा अलग्गै राख्ने
५. आँखा, नाक तथा मुखमा अनावश्यक रुपमा हात नलैजाने
६. जथाभावी नथुक्ने वा सिँगान नफाल्ने
७. शंकास्पद संक्रमितबाट सकभर टाढै बस्ने